Sajhasabal.com |आजको बिदेशी मुद्राको विनिमयदर कति छ ? हेर्नुहोस् ( सुचिसहित )
रक्षाबन्धन, ऋषितर्पणी र जनैपूर्णिमा मनाइयो
आजको बिदेशी मुद्राको विनिमयदर कति छ ? हेर्नुहोस् ( सुचिसहित )
बैशाख २, काठमाडौं । आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बिदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ । आज एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११० रुपैयाँ ३५ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य ११० रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ ।
आज एक युरोको खरिददर १२४ रुपैयाँ ७३ पैसा छ भने बिक्रिदर १२५ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रिदर १४५ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर ०९ रुपैयाँ ८५ पैसा छ भने बिक्रिदर ०९ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ ।
कतारी एक रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । यसैगरी कुवेती एक दिनारको खरिददर ३६३ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रिदर ३६५ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ ।